Izidubedube ezinobundlobongela ze-COVID-19 zasasazeka ukusuka eGuadeloupe ukuya eMartinique
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeMartinique Breaking » Izidubedube ezinobundlobongela ze-COVID-19 zasasazeka ukusuka eGuadeloupe ukuya eMartinique
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Iindaba zeMartinique Breaking • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Abaqhankqalazi baxelwe ngumsindo ngokungamkelwanga yirhuluneli yaseMartinique ekupheleni kosuku lwabo lokuqala loqhanqalazo.
Izolo, iimanyano zabasebenzi ezili-17 kwisiqithi saseFransi saseMartinique zacela uqhankqalazo jikelele ukubonisa ukuchasa kwabo isigunyaziso sokugonya i-COVID-19 kubasebenzi bezempilo kunye nokunyanzeliswa kwepasi lezempilo le-coronavirus yaseFransi.
Kodwa uqhanqalazo lwakhawuleza lwajika GuadeloupUqhankqalazo lwe-e-style kunye neengxelo zamapolisa kunye nabacimi-mlilo MartiniqueIsixeko esilikomkhulu saseFort-de-France siza phantsi kwemipu.
Imeko iye yaqatsela xa abaqhankqalazi bevakala benomsindo ngokungamkelwa yirhuluneli yaseMartinique ekupheleni kosuku lwabo lokuqala loqhankqalazo.
Nangona kungekho nzakeleyo ixeliweyo, abezomthetho kunye nabasebenzi beenkonzo zikaxakeka bebesoloko bejoliswa kwizithonga zemipu ngelixa bengenelela ukucima umlilo kwiindlela zikawonke-wonke kwisixeko saseFort-de-France phezolo.
Ngoku ka MartiniqueIsithethi sezokhuseleko loluntu uJoël Larcher, amapolisa kunye nabacimi-mlilo bajongwe ngokudubula, kwaye iimoto ezininzi zatshiswa ngexesha lesiphithiphithi sasebusuku.
Abaqhankqalazi bavale iindlela ezijikeleze isiqithi saseFrench Caribbean kwaye benze amabango aliqela kurhulumente, kubandakanya nokupheliswa kwesigunyaziso sokugonya i-COVID-19 sabanonopheli, kunye nezicelo ezibanzi ezinjengokonyuswa kwemivuzo kunye nokwehliswa kwamaxabiso epetroli.
Ubundlobongela baseMartinique bunwenwele busuka kufutshane Guadeloupe, apho kwehle isiphithiphithi emva kokuba imibutho yabasebenzi iququzelele ukuhambahamba kwiveki ephelileyo ukucela umngeni kwizithintelo ze-COVID-19 apho, kubandakanya nokuqaliswa kwe-anti-coronavirus jabs kubasebenzi bezempilo.